NewatchOS 7 unogona kumhanyisa mapfupi kubva kuApple Watch | Ndinobva mac
NeWatchOS 7 unogona kumhanyisa mapfupi kubva kuApple Watch
Uyu Muvhuro wakatanga svondo ra WWDC 2020. Muhurukuro yeKeynote, Tim Cook nechikwata chake vanotiratidza zvimwe zvezvinhu zvitsva zvichabatanidzwa mumaforewa egore rino. Ehezve, iyo hombe nhau dzemasikati yaive yekufambira mberi (uye chakavanzika) iyo Apple Silicon chirongwa chiri kutora.
Pakupera kweiyi mharidzo, mabheas ekutanga evakagadziri eese matsva Apple mashandiro akavhurwa, uye zviripachena, mapurogiramu aya anga achitamba navo kwemazuva. Saka "kubuda" kwenhau dzavanoona ndezvezuva nezuva. Ngatiende neinonakidza imwe: ne WatchOS 7 mapfupi anogona kumhanyisa kubva kuApple Watch.
Kana iwe uine Apple Watch, ziva kuti iwe unogona mhanyisa mapfupi pane chako chishandiso pasina iPhone yakabatana, kana watOSOS 7 ichiona kuvhurwa uku kudonha, ichiwedzera zvakanyanya kugona kwechimiro kupfuura iOS pane yako iPhone.
Apple Watch mapfupi anovimbisa kununura ane simba «vatambi»Kumwe-kubata kwezviito zvakaoma sekutanga Apple Music playlists, kudzora HomeKit zvishandiso, kukumbira Siri maitiro, uye zvimwe. Mazhinji eaya kugona ari kuuya kuApple Watch kekutanga neWatchOS 7.
Pfupi kutsigira kweOSOS kwakaziviswa Muvhuro, kunyangwe Apple isina kunyatso tsanangura mashandiro acho. Ivo havana kuita kuti zvijeke kana mapfupi achave achiwanikwa paApple Watch se zvakasununguka zviito zvemo kana zvichave zviri nyore kure mifananidzo inomhanya pane iyo iPhone.
Apple yakapindura mubvunzo iwoyo muchirongwa chekuvandudza neChishanu, vachiona kuti Apple Watch ichakwanisa kumhanyisa mapfupi pasina kuve akabatanidzwa kune iyo iPhone.
Kunyangwe chiri chokwadi kubva Muvhuro vagadziri vanogona kutotanga kuyedza beta yekutanga yewatchOS 7 pamawachi avo, vachapedza zhizha rese kuyedza anoteedzana mabheta vhezheni, kusvika zvingangodaro mushure meyakajairika Keynote ye September, iyo yekupedzisira vhezheni inosunungurwa kune vese vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » NeWatchOS 7 unogona kumhanyisa mapfupi kubva kuApple Watch
Craig Federighi anosimbisa kuonekana naBoot Camp pane ma processor eARM muhurukuro yake yekupedzisira
MINIX NEO Kuchengetedza Pro, adapta ine SSD, Thunderbolt 3, USB uye HDMI